Ngwa igwefoto kachasị mma maka ndị hụrụ foto | Akụkọ akụrụngwa
Ngwa igwefoto kacha mma maka gam akporo
Izu gara aga anyị na-ekwu banyere gị kacha mma foto ngwa ọdịnala n'ihi gam akporo, na olee otu ọ ga-esi bụrụ nke ọzọ, ugbu a anyị na-ewetara gị ngwa igwefoto kacha mma maka ọnụahịa gam akporo gị.
Ọtụtụ oge ngwa ahụ nke bịara na gam akporo adịghị eweta ihe zuru ezu mmadụ ga-achọ maka ọnọdụ ụfọdụ ma ọ bụ ịmepụta ụdị foto pụrụ iche dị ka HDR ma ọ bụ ndị na-emepụta mmetụta ahụ tilt nke na-ewu ewu n'oge na-adịbeghị anya.
Usoro nke ngwa igwefoto nke ga-akawanye mma foto foto nke ngwaọrụ gị Android na nke ahụ tupu ọbịbịa nke oge opupu ihe ubi a, anyị na-eche oge kachasị mma iji mee ka anyị kachasị mma iji were foto ndị ahụ nke ga-egosipụta oge kachasị mma nke ndụ anyị, ma anyị na onye anyị na ya ga-ebi, ndị enyi ma ọ bụ ezinụlọ.
1 Igwefoto mbugharị fx
2 360 igwefoto
3 Baịbụl hiwere isi n'ebe
4 Igwefoto HDR +
7 Igwefoto FV-5
Igwefoto mbugharị fx
M na-amalite site na Igwe Igwe Ọrịa FX ka ọ dị ihe kacha mma igwefoto ị nwere ike ịchọta dị ka onye ọzọ na gam akporo. Ọ bụ ezie na anyị anaghị eche ihu na ngwa n'efu ebe ọnụahịa ya bụ € 1,99 na Storelọ Ahịa Play, ọ bụ otu n'ime ihe ndị dị mkpa ma ọ bụrụ na ị bụ ndị hụrụ foto.
Igwefoto Igwefoto FX nwere ụdị nzacha niile, mbugharị, ngụ oge na ọbụlagodi Image stabilizer n'etiti isi ihe, gbakwunyere ọrụ ndị bụ isi nke ngwa ọ bụla nke ụdị a ga-enwerịrị dịka ọnọdụ ịgbawa, nhazi post na mmetụta dị iche iche dịka "Ntugharị-Ntugharị" ma ọ bụ mmetụta ntụgharị.
N'ozuzu ya oké mma bụ otú zuru ezu na ọ bụ. Anyị ga-achọ edemede a dum ịkpọ aha ya niile. Ekwuru m, ọ bụrụ n'ị hụrụ foto n'anya, Igwefoto Zoom FX bụ nnweta dị mkpa.
Igwefoto 360 bụ ihe kasị mma free igwefoto ngwa n'ihi na android,, ebe ọ bụ na ị gaghị ahụ ihe ọzọ na ọnụahịa efu na-enye nke ukwuu. N'ime ihe karịrị ndị ọrụ 250 nde, Igwefoto 360 kwụpụ maka inwe ụdị atụmatụ dị iche iche.
Site na nzacha dị iche iche, ọnọdụ ma ọ bụ ohere ịchekwa foto na ọba anyị na igwe ojii bụ atụmatụ ndị ga-apụta nke ọma na elele anya. N’etiti akwukwo ohuru ohuru bu ihe ndi di nfe di nfe, a agbapụ mode na-achọpụta ihe ahụ nke foto ma tinye nza dabara maka ya.
Ngwa na ha na-emeziwanye na arụmọrụ ọhụrụ dabere na nsụgharị ọhụrụ ọ dịkwa n'etiti igwefoto igwefoto kacha mma maka gam akporo.
Ọ bụ ezie na ọ dị na beta na Storelọ Ahịa Play, ọ bụ otu n'ime ngwa ọhụrụ ị nwere ike ịchọta na gam akporo. Ọ bụ na CyanogenMod ROM serial ngwa, ma mgbe nsogbu nke nsogbu gasịrị, ọ kewapụrụ site na otu mmepe.
Ngwa nke nwere ezigbo njirimara, nke ya ọrụ interface kwesịrị pụta ìhè nke ahụ ga - enyere gị aka ịnyagharịa n’ime ya n’ụzọ dị mfe ma dịkwa ọsọ ọsọ. Anyị ga-enwe oghere igodo n'akụkụ maka ngwaọrụ dị iche iche dịka ọnọdụ ọkụ, nguzo ọcha, ọnọdụ ọnọdụ, HDR, nsonaazụ agba na ọnọdụ ịkụ. Na ala bọtịnụ nkwụsị, nke mgbe ị jidere ya, wiil nke nhọrọ ga-apụta ịgbanwe, n'etiti ihe ndị ọzọ, igwefoto n'ihu ma ọ bụ foto dị gburugburu, panoramic ma ọ bụ vidiyo. Ma ọ bụrụ na ị chọrọ ịhụ album nke ihe oyiyi si n'elu ị nwere ike slide ya na-ahụ foto ẹka.
Ngwa igwefoto dị ezigbo mma nwere kensinammuo na oge a na ike zuru oke dochie Oghere Usoro ahụ otu nke ekwentị gị.
Igwefoto HDR +
Ọ bụrụ na ị na-achọ ngwa iji were foto HDR, Igwefoto HDR + bụ ihe zuru oke maka ọrụ a. Na 11 agbapụ ụdịdị, ngụkọta akara nke igwefoto na ezigbo HDR, a na ngwa bụ ihe kasị mma ị pụrụ ịchọta gị gam akporo ọnụ.
Na foto ehihie ebe ọ bụla ịchọrọ wuputa mma nile nke odida obodo ma ọ bụ karịa mee ka agba nke ọ bụla dị na mbara igwe dịkwuo mma, HDR Igwefoto ga-eme ka ị were foto nwere oke dị mma.
N'etiti atụmatụ ndị ọzọ ọ nwere njikwa ziri ezi nke ịmegharị ihe nke mere na ha apụtaghị dị ka "mmụọ" na foto a, ma ị nwere ike ijikwa ụdị ọnụọgụ niile dị ka iche, agba ike ma ọ bụ ikpughe. Have nwere ugwo ngwa maka € 2,18 na a free otu na-agbalị.
Ihe ngosi lekwasịrị anya na nzacha maka gam akporo, na nke a bụ ọrụ ya bụ isi nwere ihe ruru 70 n’ime ha na okpokoro asịrị 50 iji were foto pụrụ iche.
N'etiti ụdị ị ga-ahụ na nzacha ha, retin, vintage, lomo, Diana, Holga, Polaroid, unyi, tilf-shift na ọtụtụ ndị ọzọ. Ma ọ bụghị ya ọ nwere ọrụ ndị ọzọ dịka ngwa ndị ọzọ dị ka oge, mbugharị dijitalụ, iji bọtịnụ ike were foto ma ọ bụ oyiyi stabilizer.
Vignette na ya random nyo mode awade nnọọ ụtọ na fun ụzọ na-pụrụ iche foto ya na ndi enyi gi ma obu ezinulo gi. The ụgwọ mbipute akwụ ụgwọ € 1,20 na nwere a ngosi ka ị na-agbalị tupu ị na-azụ zuru ezu otu.
VSCO Cam sitere na iOS site na nkwenye na otu ihe a, anyị na-echekwa otu n'ime akwụkwọ akụkọ ọhụrụ maka gam akporo n'oge na-adịbeghị anya. Ngwa na ihe niile n’ime otu, ebe o nwere ngwa igwefoto zuru oke ma nwekwaa ochicho onyonyo nke na eso otu uzo di nma dika nke mbu. Ihe na-agbakwunye ya na ịbụ otu n'ime nhọrọ kachasị mma maka gam akporo, na n'elu n'efu.
Omume ọzọ nke VSCO Cam bụ onye ọrụ interface nke na-enye ngwa ahụ kensinammuo na ngwa ngwa njikwa nile ya nhọrọ. Banyere ngwaọrụ edezi maka foto ahụ, ị ​​ga-ahụ mgbasa, ọnọdụ okpomọkụ, ọdịiche, ntụgharị, ịkpụ ma ọ bụ vignette.
Ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbakwunye ihe nzacha pụrụ iche iji tinye na foto gị, ị nwere ike ịhọrọ ịkwụ ụgwọ euro ole na ole iji zụta ha na Storelọ Ahịa Play. Ke ofụri ofụri, anyị na-eche ihu otu n'ime ejiji foto ngwa ọdịnala.
Ọ bụrụ na ịchọọ ọkachamara igwefoto ngwa maka gam akporo, nke a bụ Igwefoto FV-5. Ya ọtụtụ nhọrọ ga-eme ka o yie ka ị na-emeso a kpam kpam ọkachamara.
Ngosiputa ugwo, ISO, onodu uzo mmetuta, onodu elekwasi anya ma obu nguzo di ocha n’etiti oru ndi n’aru ndi DSLR dika: ngosi ihe ngosi oge, oghere na mita nkpughepu aka ya na EV na bracketing. Nchịkwa bracketing zuru ezu site na foto 3 ruo 7 na-enweghị oke ikpughe na ịgba ụzọ EV.
Anyị ga-enwe nhọrọ ndị ọzọ ị ga - eme ọbụlagodi foto dị na PNG maka nnweta ọnwụ ma ọ bụ usoro mmemme akpaaka, mkpọchi ikpughe na nguzo ọcha. Also nwekwara nhọrọ nke ekenye ọrụ igwefoto niile na igodo ahụ nkịtị nke ekwentị.
Ngụkọta ngwa nwere ya niile. Ọnụahịa ya bụ € 2,99 na o nwere mbipute n'efu nke na-egbochi oke foto.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Telephony » Mobiles » Ngwa igwefoto kacha mma maka gam akporo